Dzimwe nzira kune TeamViewer yekubatsira kure, Emulator.online ▷ 🥇
TeamViewer hapana mubvunzo iri rinonyanya kushandiswa chirongwa chekubatsira chiri kure pasi, zvakare nekuda kwekuita kwayo kwakasarudzika mune ese network mamiriro (kunyangwe pane anononoka ADSL manetwork anoshanda pasina matambudziko) uye nekuda kwemamwe akawanda mabasa senge ari kure faira kuchinjisa. uye otomatiki kure kuvandudza (inobatsira kumutsiridza chirongwa kunyangwe paPC dzevashandisi veavice). Nehurombo, zvakadaro, iyo Yemahara vhezheni ye TeamViewer iwe une miganhu mikuru: hazviite kuishandisa mukutengeserana, cheki yekubatanidza inoitwa (kuona kana tiri vashandisi vega) uye hazvigoneke kumisikidza videoconference kana purinda iri kure pasina kumisikidza rezenisi remushandisi.
Kana isu tichida kupa rubatsiro rwekure kana kubatsira kambani yedu pasina kubhadhara chero huwandu hwemari, mune ino gwara tinokuratidza iyo nzira dzakanakisa dze TeamViewer yekubatsira kure, saka unogona kutora kutonga kwechero komputa iri kure pasina nguva kana nguva.
VERENGA ZVIMWE: Remote desktop zvirongwa zvekubatanidza kure kure kune komputa
Dzimwe nzira dzakanakisa dze TeamViewer
Iwo masevhisi atichakuratidza iwe anogona kushandiswa mune chero nharaunda, kusanganisira nyanzvi: ipapo tinogona kudzora maPC ari kure uye kupa rubatsiro rwehunyanzvi pasina kubhadhara euro. Aya masevhisi zvakare ane zviyero (kunyanya mune zvemberi maficha) asi hapana chekudzivirira rutsigiro. Kuti zvive nyore isu tinokuratidza iwe chete masevhisi anoratidzwa yakapusa kugadzirisa seTimuViewer kunyangwe kune vashandisi vasina ruzivo (kubva pano maonero, TeamViewer achiri iye mutungamiri weindasitiri)
Yakanakisa TeamViewer imwe nzira yaunogona kushandisa izvozvi ndeye Chrome kure desktop, inoshandiswa kurodha pasi Google Chrome pane ese maPC uye nekuisa zvese chikamu cheseva (paPC inodzorwa) uye chikamu chemutengi (paPC yedu yatichapa rubatsiro).
Tinogona kukurumidza kumisikidza rubatsiro rwekure ne Chrome Remote Desktop nekuisa iyo browser plug-in (tinovhura saiti saiti uye tinya Isa pane pc), kutevedzera iyo yakasarudzika kodhi yakagadzirwa kune ino timu uye, ichititora isu kuenda kune revatengi peji pane yedu timu, tichipinda kodhi. Pakupera kwekugadzirisa, isu tichakwanisa kutarisa desktop kuti tipe rubatsiro nekukurumidza uye nekukurumidza! Tinogona zvakare kuisa chikamu cheseva pane akawanda maPC uye nekuvachengeta kune redu rekutsigira peji pasi pemazita akasiyana, kuitira kuti tigone kudzora maviri kana anopfuura makomputa pasina matambudziko. Chrome Remote Desktop inogona zvakare kushandiswa kubva kune iyo smartphone, sezvinoonekwa mune inotungamira Chrome Remote Desktop nefoni (Android ne iPhone).
Iperius kure desktop
Imwe downloader yemahara yekupa rubatsiro rwekure ndeye Iperius kure desktop, inowanikwa seyo yega software pane yepamutemo kurodha peji.
Chirongwa ichi chinototakurika, ingo tangisa iyo inoitisa kuti ive nekukurumidza sevha uye yevatengi interface yakagadzirira kushandisa. Kugadzira chinongedzo chiri kure, tanga chirongwa paPC kudzora, sarudza password yakapfava mumunda wezita rimwe chete, kopi kana kuti ngatitaurire iwe kodhi yenhamba iripo kumusoro uye isa iyo muIperius Remote Desktop yakatanga pakombuta yedu, pasi pemusoro wenyaya ID yekubatanidza; Iye zvino tinodzvanya bhatani reKubatanidza uye tinyore password, kuti tikwanise kudzora pakadzika desktop uye nekupa rubatsiro runodiwa. Chirongwa ichi chinotibvumidza kubata nemusoro maID atinobatanidza uye zvakare inopa ese asingatarisirwe nzira dzekuwana (kusarudza password yekuwana zvisati zvaitika): nenzira iyi zvakakwana kutanga chirongwa mu auto-kutanga kupa rubatsiro rwekukurumidza.
Kurumidza kutsigira Microsoft
Kana isu tiine PC ine Windows 10 tinogona zvakare kutora mukana wekushandisa Nekukurumidza rubatsiro, inowanikwa muKutanga menyu pazasi kuruboshwe (chingotsvaga zita racho).
Kushandisa chishandiso ichi kuri nyore chaizvo: tinovhura mashandisirwo pakomputa yedu, tinya Batsira mumwe munhu, pinda neakaundi yeMicrosoft (kana tisina imwe tinokwanisa kugadzira imwe nhunzi mahara), uye titarise kodhi yekutakura. yakapihwa. Iye zvino ngatiendei kucomputer yemunhu achazopinda, vhura iyo Inobatsira Rubatsiro app uye isa yedu opareta kodhi: nenzira iyi tichava nekutonga kuzere kwedesktop uye tinokwanisa kupa chero mhando yerubatsiro, pasina muganho wenguva. Iyi nzira inosanganisa kumhanya kweRDP pamwe nekureruka kweTimuViewer, ichiita iyo iyo chishandiso chinokurudzirwa naNeigaweb.net.
Kana isu tine makomputa mazhinji ane akasiyana masystem ekushandisa kudzora ari kure, chete yakasununguka uye yakavhurika sosi mhinduro yatinogona kubheja pairi DWService, inogadziriswa yakananga kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Iyi sevhisi inogona kushandiswa yakananga kubva kubhurawuza, zvirinani kune avo vanopa rubatsiro. Kuenderera mberi tinotora iyo DWAgent pakombuta (kana makomputa) kuti ubatsirwe, zvitange pamwe nePC uye utarise ID nephasiwedi inodikanwa yekubatana; Iye zvino ngatiendei kukomputa yedu, ngatigadzirei mahara account pane saiti iwe yaunoona pamusoro, uye wedzera komputa kuburikidza neID uye password. Kubva ikozvino zvichienda mberi, isu tichakwanisa kupa rubatsiro nekuvhura chero bhurawuza uye kupinda muaccount medu, uko ari kure manejimendi makomputa anozoonekwa. Sezvo sevha inogona kuiswa paWindows, Mac uye Linux DWService ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kumakambani makuru kana kune avo vane makomputa mazhinji.
Kana isu tichida kupa yakapusa kure rubatsiro kune shamwari kana mhuri isu tinokwanisa zvakare kushandisa sevhisi iyo yainopa UltraViewer, inowanikwa kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Tinogona kufunga sevhisi seimwe TeamViewer lite vhezheni, sezvo iine yakafanana yakafanana interface uye inoshanda yakafanana nzira yekubatanidza. Kuti uishandise, kutaura zvazviri, ingoitanga iyo pakombuta kuti ichengetedzwe, teedzera iyo ID uye password uye uiise muchirongwa chechirongwa pakombuta yemubatsiri, kuti ugone kudzora desktop iri kure nenzira inoyerera uye pasina kushambadzira windows kana kokero dzekuchinjira kuPro Shanduro (zvese zvinozivikanwa TeamViewer kukwana).
Iko hakuna kushomeka kweimwe nzira kune TeamViewer uye zvakare zvakareruka kushandisa uye kugadzirisa, kunyangwe kune vashandisi vevashandisi vane rudzi urwu rwe software (muchokwadi, ingotaura ID yako nephasiwedi kune wedu ari kure mubatsiri kuti aenderere mberi). Iwo masevhisi atakakuratidza iwe anogona zvakare kushandiswa munzvimbo yehunyanzvi (kunze kweiyo UltraViewer, iyo yemahara yekushandisa wega), ichipa imwe nzira inoshanda kune inodhura TeamViewer rezinesi yebhizinesi.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvirongwa zvekurebesa, tinokukoka iwe kuti uverenge magwara edu Maitiro ekuvhura PC iri kure kuti ushande kure mi Maitiro ekudzora komputa pamusoro peInternet kure.
Kana pachinzvimbo isu tichida kudzora kure Mac kana MacBook, tinogona kuverenga chinyorwa chedu Maitiro ekudzora Mac skrini zviri kure.
Nzira yekuvhura CSV faira nenzira kwayo
Maitiro ekugadzirisa maratidziro ewebhu webcam (musiyano uye kupenya) paWindows PC
Maitiro ekupinda Zoom paunogamuchira kukokwa
Inoonekwa mumusangano wevhidhiyo ine 3D avatar inofamba sesu
Iyo yakanakisa yemahara gore kusevha mafaera online
Wedzera mutemo pane yako PC screen
Shandurura MKV kuAVI kana kupisa MKV kuDVD
Gadzira mapikicha epanoriki uye mifananidzo inosvika mazana matanhatu pamhepo paPC yako
Sanganisa mimhanzi paPC neyemahara DJ zvirongwa
Anita PC desktop yako: mapikicha ane mapikicha collages, 3D Screensavers uye majeti
Virtual 3D microscope pamhepo uye yakasununguka kurodha pane komputa yako
Visio dzimwe nzira dzekuchera machati, kugadzira flowcharts, dhayaini, uye